Ilu 18 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Onye na-anọ iche na-achọ ihe ga-abara naanị ya uru (1)
Aha Jehova bụ ụlọ elu siri ike (10)
Ọgaranya na-ewere akụ̀ ya ka ihe na-echebe ya (11)
Ọ dị mma igecha mmadụ abụọ na-ese okwu ntị (17)
E nwere enyi hụrụ enyi ya n’anya karịa nwanne ya (24)
18 Onye na-anọ* iche na-achọ ihe ga-abara naanị ya uru. Ọ naghị anabata ezigbo amamihe.* 2 Onye nzuzu anaghị achọ ịghọta ihe. Ọ bụ naanị ihe dị ya n’obi ka ọ na-achọ ikwu.+ 3 Onye ajọ omume bata, a na-eleda mmadụ anya. Mmadụ mewe iberiibe, a na-emenye ya ihere.+ 4 Okwu na-esi mmadụ n’ọnụ apụta yiri mmiri miri emi.+ Ebe e si enweta amamihe dị ka iyi nke na-asọ asọ. 5 Imenyere onye ajọ omume adịghị mma,+Ikpe onye ezi omume ikpe na-ezighị ezi adịghịkwa mma.+ 6 Ihe onye nzuzu na-ekwu na-akpata esemokwu,+Ọ na-ejikwa ọnụ ya ekwu ihe ga-eme ka e tie ya ihe.+ 7 Ihe onye nzuzu na-ekwu ga-ala ya n’iyi,+Ọ na-ejikwa ọnụ ya ekwute ihe nwere ike ịta isi ya.* 8 Okwu onye na-ekwutọ mmadụ dị ka nri na-atọ ụtọ.+ A na-elo ya ngwa ngwa, ya abanye n’afọ.+ 9 Onye ọ bụla nke dị umengwụ n’ọrụ ọ na-arụNa onye na-ala ihe n’iyi bụ nwanne.+ 10 Aha Jehova bụ ụlọ elu siri ike.+ Onye ezi omume na-agbaba na ya, e chebe ya.+ 11 Akụ̀ onye ọgaranya bụụrụ ya obodo a rụsiri ike. N’anya ya, ọ dị ka mgbidi nke na-echebe ya.+ 12 Mmadụ na-ebu ụzọ adị mpako tupu ya adaa,+Mmadụ na-ebukwa ụzọ adị umeala n’obi tupu a kwanyere ya ùgwù.+ 13 Ọ bụrụ na mmadụ azaa okwu tupu ya anụ ihe merenụ,Ọ na-egosi na ọ dị iberiibe, na-emechukwa onwe ya ihu.+ 14 Mmadụ ga-edili ọrịa ma ọ bụrụ na obi siri ya ike,+Ma è nwere ihe mmadụ ga-emeli ma ọ bụrụ na obi dara ya mbà?+ 15 Onye na-aghọta ihe na-amụta ihe,+Ndị ma ihe na-egekwa ntị ka ha mụta ihe. 16 Onyinye mmadụ na-enye na-emeghere ya ụzọ,+Ọ na-emekwa ka ọ bịa n’ihu ndị ukwu. 17 Mmadụ na ibe ya nwee okwu, ọ na-adị ka ọ̀ bụ onye bu ụzọ kwuo ihe na-ese na-ekwu eziokwu+Ruo mgbe onye nke ọzọ bịara gbaa ya ajụjụ.+ 18 Ife nza na-eme ka esemokwu bie,+Ọ na-edozikwara dike na dike okwu. 19 Ọ na-esi ezigbo ike ime ka obi jụrụ nwanne e mejọrọ karịa otú ọ na-esi ike imeri obodo a rụsiri ike.+ Esemokwu na-ekewakwa ndị mmadụ otú ọnụ ụzọ ámá a tụchiri atụchi n’obodo a rụsiri ike si ekewa ndị nọ n’ime ya na ndị nọ n’èzí.+ 20 Ihe mmadụ na-ekwu dị ka nri na-abanye ya n’afọ.+ Ihe ọ bụla ọ na-ekwu ga-adị ya n’isi. 21 Mmadụ nwere ike iji ire ya kwutere onwe ya ndụ ma ọ bụ ọnwụ.+ Ndị ọ na-amasị ikwu okwu ga-anata ụgwọ ihe ha kwuru.+ 22 Onye lụtara ezigbo nwaanyị nwetara ezigbo ihe,+Jehova na-emekwara ya amara.+ 23 Onye dara ogbenye na-arịọ arịrịọ ma o kwuwe okwu,Ma onye bara ọgaranya na-eji olu ike asa okwu. 24 E nwere ndị enyi dị njikere ịla ibe ha n’iyi,+Ma e nwere enyi hụrụ enyi ya n’anya karịa nwanne ya.+
^ Ma ọ bụ “na-akpa.”
^ Ma ọ bụ “E nweghị ihe o ji ezigbo amamihe kpọrọ.”
^ Na Hibru, “Egbugbere ọnụ ya na-abụrụ mkpụrụ obi ya ọnyà.”